နှင်းကျားသစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ နှင်းကျားသစ်များ တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ဒေသများ ဖော်ပြထားသော မြေပုံ
နှင်းကျားသစ် (အင်္ဂလိပ်: Snow Leopard) သည် ကြောင်မျိုးရင်းဝင် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီး ကြောင်ကြီးမျိုးစု၏ ပန်တယ်ရာ အန်စီယာ (Panthera uncia) မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ နှင်းကျားသစ်အများစုသည် အလယ်အာရှဒေများတွင် နေထိုင် ကျက်စားကြသည်။ နှင်းကျားသစ်ကို ကျားသစ် အဖြစ် ခေါ်ဆိုကြသော်လည်း ကျားသစ်အကောင်အသေးများနှင့် သာ ခပ်ဆင်ဆင်တူပြီး ပါဏဗေဒအရ မျိုးစုတူသော်လည်း မျိုးစိတ် မတူကြချေ။
နှင်းကျားသစ်များသည် အရှည်အားဖြင့် ၁.၄ မီတာခန့် ရှည်လျားကြပြီး အမြီးအရှည်မှာ ၉၀ စင်တီမီတာမှ ၁၀၀ စင်တီမီတာ အထိ ရှည်လျားလေ့ ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အလေးချိန်အားဖြင့် ၇၅ ကီလိုဂရမ် အထိ ရှိတတ်သည်။ နှင်းကျားသစ် တို့တွင် မီးခိုးရောင် နှင့် အဖြူရောင် အမွှေးများနှင့် အနက်ရောင် အစက်အပြောက်များ ရှိတတ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အမြှီးတွင် အစင်းများ ရှိတတ်သည်။ နှင်းကျားသစ်တို့၏ အမွှေးများမှာ အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရန် အတွက် ရှည်လျား ထူထပ်နေလေ့ ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ခြေထောက်များမှာလည်း ကြီးမားပြီး အမွှေးထူကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ အနေနှင့် နှင်းထဲတွင် လွယ်ကူစွာ လျှောက်သွားနိုင်ကြသည်။
နှင်းကျားသစ်တို့သည် ၁၅ မီတာခန့်အထိ ဝေးလံစွာ ခုန်နိုင်ကြသည်။ ကြောင်မျိုးရင်းဝင် တိရစ္ဆာန်များအနက် နှင်းကျားသစ် တစ်မျိုးသာလျှင် ကြောင်ကဲ့သို မအော်နိုင် မဟိန်းနိုင်ကြပေ။
နှင်းကျားသစ်တို့သည် အများအားဖြင့် ညဘက်တွင် ကျက်စားလေ့ ရှိပြီး တစ်ကောင်တည်း နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ ရက် ၁၀၀ ခန့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်တွင် နှင်းကျားသစ်မသည် ကလေး ၂ ကောင် ၃ကောင်ခန့်ကို မွေးလေ့ ရှိသည်။ သူတို့သည် အလွန်ကြီးမားသော ကြောင်မျိုးရင်းဝင် တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ပြီး လူတို့သည် ၎င်းတို့ကို အမွှေးအတွက် သတ်ဖြတ်လေ့ ရှိကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ McCarthy, T. (2017). "Panthera uncia". IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN.
↑ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြောင်ကြီးမျိုး ဆောင်းပါး
↑ "The larynx of roaring and non-roaring cats" (1989). Journal of Anatomy 163: 117–121. PMID 2606766. PMC:1256521.
↑ "Hyoid apparatus and pharynx in the lion (Panthera leo), jaguar (Panthera onca), tiger (Panthera tigris), cheetah (Acinonyx jubatus) and domestic cat (Felis silvestris f. catus)" (2002). Journal of Anatomy 201 (3): 195–209. doi:10.1046/j.1469-7580.2002.00088.x. PMID 12363272.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှင်းကျားသစ်&oldid=716909" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။